Everton Oo Gool Taariikhda U Galay Ka Dhalisay Liverpool – Heemaal News Network
Everton ayaa taariikh cusub ka samaysay Anfield kaddib markii ay gool deg-deg ah ka dhalisay daqiiqaddii saddexaad ee ciyaarta Merseyside derby.
Liverpool oo saddexdii ciyaarood ee ugu dambeeyey lagaga badiyey garoonkeeda Anfield ayaa martigelisay Everton oo ciyaartoodii hore ee bilowgii xili ciyaareedka ay barbarro kusoo dhamaysteen, iyadoo kulankaasna ay kaga dhaawacmeen Virgil van Dijk iyo Thiago Alcantara.
Tababare Jurgen Klopp ayaa rajaynayay inay kooxdiisu qaab ciyaareed wanaagsan ku bilaabato kulankan, waxaanu keenay shaxdii uu toddobaadkii hore kaga soo badiyey RB Leipzig oo aanu waxba ka beddelin, hase yeeshee Everton ayaanay waqti badan ku qaadanin inay jabiso difaaca diciifka ah ee Liverpool.
Kubbad uu James Rodriguez soo tuuray ayaa waxa uu u dhiibay Richarlison iyaduu uu kubadda u daba mariyey labada difaac dhexe ee Jordan Henderson iyo Ozan Kabak, waxaanu laacibka reer Brazil isagoo aan wax qalad ah samaynin uu dhamaystir qurux badan ugu aftaxay kooxdiisa.
Liverpool ayuu naxdin ku noqday goolkan degdegga ah, xilli ay rajaynayeen inay jidka guusha ku soo laabtaan, isla markaana ay iska ilaaliyaan in Everton ay Anfield ku hesho guusheedii ugu horreysay tan iyo 1999kii.
Goolkan oo uu daqiiqaddii saddexaad Everton u dhaliyey Richarlison ayaa noqday goolkii labaad ee ugu degdegga badnaa ee Premier League ah ee Everton ay abid ka dhaliso Liverpool. Waxa kaliya oo ka horreeyey gool uu sannadkii 1999kii u dhaliyey Olivier Dacourt daqiiqaddii koowaad ciyaar dhacday bishii April ee sannadkaas.